I wanted to capture the lives of people who have to work for their families and then return home at night. My paintings usually describe real life. I painted this one because of the circumstances of my environment. I felt and presented them on my own. Maybe I am in the painting. I used to take the bus for my daily commute. Now these paintings have become social records. I kept four or five of them for myself. Today there are big buses imported from Korea and China. The bus system in Yangon changed under the NLD government. Small children won’t even know what my paintings are about when they grow up. It all changed withinadecade. Now it’s quite convenient. You put 200 kyats inabox. And there are no bus conductors. We used to be afraid of them. Every part of the bus used to makeanoise, except the horn. Now there are air-conditioned buses. I also had another reason to paint Dyna trucks. Between 1990 and 2010,agroup was formed to suppress people who opposed the military government. It was called Swan Arr Shin. They took informers from neighbourhoods inaDyna truck. They were given biryani for lunch. They wore round bamboo hats, though not the NLD’s bamboo hats. They also carried batons. There werealot of those guys in my neighborhood. I wanted to record them indirectly.
Until December 2020, I’m serving as Secretary to the Myanmar Artists Organization (Central). I took up the position after an election in 2017. When we started, we were in 30 townships. Now we have offices in more than 100 townships and over 7000 members. We organized an exhibition on7January in the Bagan cultural zone for our 101st anniversary. About 650 Burmese artists and 20 foreign artists took part. Most artists needalot of help. When I travel to rural areas, I see they’re needy. Our organization gives them paper, watercolour and oil paints. We also provide painting lessons for children. For three summer months, we teach children in our offices five daysaweek. Secretaries from each township volunteer to teach.
In 2015, the NLD government came to power. Changes have been made by the NLD, but they cannot overcome the barriers set by the other side. The Ministry of Home Affairs is not under the command of the President. As an artist, I want to see change born out of unity. But it has not turned out as well as we expected. The NLD government is still trying. They haven’t achieved as much as we expected.
ကိုယ့်အိမ်သူအိမ်သားတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ညဘက်ရောက်မှ ပြန်ကြရတဲ့ ဘဝတွေကို ညွှန်းတာပါ။ ကျနော့်ပန်းချီကားတွေမှာ လူတွေရဲ့ဘဝ တွေကို ရေးတာများတယ်။ ရေးဖြစ်သွားတာက ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်တွေက ရိုက်ခတ်တာပဲလေ။ အဲ့ဒါတွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ခံစားပြီး ပြန်တင်ပြရတာပေါ့။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပန်းချီကားထဲပါချင်ပါမယ်။ နေ့စဥ်ခရီးသွားတော့ ဘတ်စ်ကားစီးတယ်။ အခုကျတော့ ကျနော်ရေးတဲ့ဟာတွေက မှတ်တမ်းပုံစံဖြစ်သွားပြီ။ ကျနော့်ဆီမှာ မရောင်းပဲနဲ့ ထားတဲ့ လေးငါးကားကျန်သေးတယ်။ အခုလက်ရှိကျတော့ ကိုရီးယားတို့ တရုတ်တို့က သွင်းတဲ့ ဘတ်စ်ကားကြီးတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီ ဘတ်စ်ကားကြီးတွေနဲ့ ကျတော့ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါက NLD အစိုးရ လက်ထက်မှာမှ YBS ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တာ။ ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ ပန်းချီကားတွေဆိုရင် ငယ်သေးတဲ့ ကလေးတွေကြီးလာရင် သူတို့ သိချင်မှတောင်သိတော့မယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာပဲ ပြောင်းသွားတာပေါ့။ အခုလက်ရှိကျတော့ တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်။ ၂၀၀ ကို ပုံးထဲထည့်တယ်၊ စပယ်ယာမရှိတော့ဘူ။ စပယ်ယာရှိရင် သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ စီးရတယ်။ ကားကလည်း ဟွန်းသာမမြည်တာ ကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်မြည်တယ်။ ကားတွေက အခုကျတော့ အဲကွန်းဘတ်စ်ကြီးတွေလေ။ နောက် ဒိုင်နာတွေရေးတာက ကျနော်ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုရှိတယ်။ ၂၀၁၀ နဲ့ ၁၉၉၀ ကြားမှာ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ သူတို့ အဖွဲ့ဖွဲ့တယ်။ စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့တွေပေါ့။ သူတို့က ရပ်ကွက်ထဲက သတင်းပေးတွေကို ဒိုင်နာကားပေါ်မှာခေါ်သွားတယ်။ ထမင်းစားချိန်ကျရင် ဒံပေါက်ကျွေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ NLD ခမောက်မဟုတ်ပဲ ခမောက်လုံးလုံးကြီးတွေ ပေးထားတယ်။ လက်ကိုင်တုတ်တချို့ ပေးထားတယ်။ ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာလည်း အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေ အများကြီးပဲလေ။ အဲ့ဒါတွေကို ကျနော်က စိတ်ထဲက တိုက်ရိုက်မပြောပဲနဲ့ သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ မှတ်တမ်းလုပ်တဲ့ သဘောပါ။
လက်ရှိကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ပန်းချီ ပန်းပု အစည်းအရုံးဗဟိုမှာ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာအထိ အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ယူထားပါတယ်။ ၂၀၁၇ က ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီး တာဝန်ယူလိုက်တာ။ ကျနော်တို့ စဖွဲ့ခါစက မြို့နယ်ပေါင်း သုံးဆယ်လောက်ပဲရှိတယ်။ အခုဆိုရင် မြို့နယ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သွားပြီ။ အသင်းဝင်တွေက ၇၀၀၀ ကျော်လောက်ရှိတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လပိုင်း ၇ ရက်နေ့က ပုဂံက ရှေးဟောင်းယဥ်ကျေးမှုဇုန်မှာ ၁၀၁ နှစ်မြောက် ပြပွဲကျင်းပတယ်။ ပန်းချီဆရာအယောက် ၆၅၀ လောက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက ပန်းချီဆရာတွေက အယောက် ၂၀ လောက်ပါတယ်။ ပန်းချီဆရာတော်တော်များများက လိုအပ်နေတာပါ။ ကျနော် နယ်အစုံရောက်ဖြစ်တော့ နယ်က ပန်းချီဆရာတွေ မပြည့်စုံကြဘူး။ အစည်းအရုံးက စာရွက်တွေ၊ ရေဆေး၊ ဆီဆေးတွေ ပေးခဲ့တာပေါ့။ ကလေးတွေ သင်ကြားရေးလည်းလုပ်နေတယ်။ နွေရာသီသုံးလ တစ်ပတ်ကို ငါးရက် အစည်းအရုံးရဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာ သင်ပေးတယ်။ မြို့နယ်တိုင်းက အတွင်းရေးမှူးတွေ ပရဟိတ ပုံစံမျိုးနဲ့ သင်ပေးတယ်။
၂၀၁၅ မှာ NLD အစိုးရပေါ့နော်။ အဲ့တော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ NLD အစိုးရပိုင်းကလည်း ပြောင်းတော့ ပြောင်းလဲနေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ဟိုဘက်အခင်းအကျင်းကို မကျော်နိုင်ဘူး။ ပြည်ထဲရေးဆိုလည်း ကျနော်တို့ သမ္မတ အောက်မှာ မရှိဘူးလေ။ ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ ကျနော်တို့ကတော့ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပြောင်းလဲတာကိုပဲ သဘောကျတယ်။ အခြေအနေက ကျနော်တို့ မျှော်မှန်းသလောက်တော့ ဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ NLD အစိုးရလည်း ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်ပဲလေ။ သူတို့လည်း မျှော်မှန်းသလောက်တော့ မဖြစ်ပါဘူး။
၂၀၂၀ မတ် ၁၁